Maxaa Ka Khaldan Shaqaalaha Caafimaadka? W/Q: C/raxmaan C/laahi Warsame – somalilandtoday.com
Maxaa Ka Khaldan Shaqaalaha Caafimaadka? W/Q: C/raxmaan C/laahi Warsame
Tan iyo intii aan dab ka baydhay waxaan maqali jiray oo dhagahaygana ka buuxsantay dadka caafimaadka ka shaqeeya iyo sida ay ugu liitaan la macaamilka dadka ay u adeegaan ee bukaanka ah. In kasta oo waayadii hore ii sinnaayeen dadka caafimaadka ka shaqeeya balse baryahan danbe waxaan ku baraarugay in ay iyaga laftoodu ku sii kala daranyihiin xidhiidhka ay la sameeyaan dadka ay u shaqeeyaan.
Baryihii hore waxaan maskaxda ku haystay sawir ah in dhakhaatiirta waaweyn uun ay ku koobantahay macaamil xumada dadka bukaanka ahi ay ka tirsadaan shaqaalaha caafimaadka iyo goobaha caafimaadkaba, balse waxaan ogaaday hadda in xaalku sidaa ka duwanyahay.
barashada saxaafadda ku jirnay waxa na la gu odhan jiray qofka caafimaadka bartay haddii uu qalad galo waxa dhimanayaa waa hal qof laakiin qofka saxafiga ahi haddii uu war qaldan oo aan layska hubsan qoro waxa ku dhimanaya dad badan. Aniga oo taa maskaxda ku haystay waxaan u haystay in dadkani yihiin dad sidaa wada og oo iyaga laftooda loo sheegay laguna celceliyay qiimaha ay leedashay nafta banii adanku, balse arrinku sidaa ma noqon.
Xogta aan halkan idinkula wadaagayaa maaha mid aan habeen uun la soo toosay balse Inta badan, Ilaahay SWT baan ugu mahad naqayaaye ma ihi dadka xanuunku ku badanyahay, muddo ayaan u fiirsanayay goobaha caafimaadka ee dhammaan soomalilaan intii aan ka gaadhay. Dhacdooyinka qaar aniga ayay si shakhsi ah iila kulmeen qaar kalena dadkii ay ku dheceen ayaa ii ga warramay. Sidaa daraaddeed ayaan goostay inaan idinla wadaago si dadweynuha wax ay arkeen uun aan ugu dhex cariyo ama ugu yaraan u xasuusiyo.
Dhaliilaha laga sheego dadka caafimaadka ka shaqeeya ee u badan hab dhaqankooda ku waajahan dadka ay u adeegaan ee bukaanka ah ama ehelladooda waxaan ku soo ururiyay saddex nooc oo kala ah: 1. Hadal 2. Ficil 3. Iyo soo dhaweyn la’aan ama waji xidhnaan.
Aniga oo sabi ah oo aan sabada reerka ka fogaan waxaan maqli jiray qofkaasi ma dhakhtar baa naxariis daranaa? Markii aan eraygaa daba galay waxa ii soo baxay in dhakhaatiirta waaweyni siiba kuwa qalliinka qaarkooda ay marka bukaanka loo keeno dadka ku odhan jireen qofka qali maynno illaa xaddigaa lacagta ah halkaa dhigtaan, lagana yaabaa ehellada qofkaan xanuunsanayaana in aanay haynba xaddigaa uu sheegtay, gorgortanka iyo hadalka laysku celcelinayaa marka uu dheeraado waxa dhici karaysa in qofkiiba sidaa ku qudh baxo
Waxa kale oo lagaga cawdaa shaqaalahaa goobaha caafimaadka badankooda hadallo qallafsan oo bilaa naxariis ah iyo hanjabaad ay kula kacaan qofka bukaanka ah ee tiisiiba la liita ama dadka ku dul daalay ee ehelladiisa ah lana tacaalaya qofkaa bukaanka ah. Taasina waxay ku keentaa qofka buka iyo dadka hayaba niyad jab iyo is ciil kaambi.
3. Waji xidhan
Way yartahay inaad tagto goob ka mid ah goobaha caafimaadka dadka loogu adeego dhammaan Soomalilaan oo si waji furan oo kalgacaltooyo leh laguu soo dhaweeyo. Badi dadkan ka shaqeeya goobahan miyi iyo magaalaba waa dad aan waji furan lahayn iyo soo dhaweyn midna lagana yaabaa qaarkood inay hadalkaba ku deeqsiin wayaan. Hadii ay odayaashii hore qaar noolaan lahaayeen waxay ku fasiri lahayeen dad geel laga dhacay. Dadkaasi marka aad u gasho waxaad arkaysaa inay iska sii cadhaysnaayeen, waxaanad u malayn kartaa inay cid isa soo laayeen. Marmarka qaarkood waxaad is odhanaysaa tolow ma shaqadaanay ku faraxsanayn? Oo haddii aanay shaqada ku faraxsanayn may isga tagaan oo meel dhaanto raadsadaan, haddii ay is leeyihiin ma heli karaysaanna may halkoodan woxoogaagu ka soo galo iska jafjaftaan. Dadkaa qarkooda waxaaban ka baqaa anuu in marka qofka bukaanka ahi u galo uu ku sii xanuunsado waji adayggooda.
Meelaha qaarkood habdhaqanka shaqaalaha caafimaadku wuxuu gaadhsiisanyahay qudh gooyo. Dhawaan waxaa ka dhacday mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee dumarku ku ummulaan arrin naxdin iyo anfariir kaga tagtay intii ogeyd.
Ilmo yar oo markaa dhashay oo ay ku yartahay ogasajiintu ayaa lagu rakibay qalabkii siinayay hawada waxaana gabadh kalkaaliso (Nurse) ah loo sheegay inay ilaaliso ilmahaasi yar inta uu qalabkaasi ku rakibanyahay. Dhakhtarkii weynaa markii uu ka tagay kalkaalisadii waxay furatay telfankeedii gacanta kuna mashquushay, mar danbe uunbay baraarugtay ilmihii yaraa oo ka kogtay. Qoyskii ilmaha dhalay markii ay yimaaddeenna waxa si fudud loogu qanciyay ilmihiinnii yaraa ma badbaadin.
Tu kaloo ka daran baa jirtee taana bal aan sheego.
Qof dumar ah oo ku foolanaysay mid ka mid ah cisbitaallada dhalmada ayaa la sheegay inay u baahantahay in la qalo waxaa loo soo toosiyay dhakhtarkii qalayay, markii uu soo galay waxa uu arkay dumarkii kalkaalisooyinka ahaa ee shaqada habeenkii lahaa oo iska wada hurda marka laga reebo mid kaliya oo qof waayel ah ahayd dumarkii cusbitaalka yaallay ee foolanayay na ay wada jibaadayaan oo kalkaalisadaas oo kaliyi ku wareegayso, wixii uu sameeyay buu sameeyay.
Haddaba waa yaabe miyaan shaqaalaha caafimaadka looba sheegin cidda ay u shaqaynayaan ee naf soo moodday aqoonta yar ee Ilaahay siiyay inay yihiin banii aadan Ilaahay Korree oo ceeb ka nasahnaaye qiimo u yeelay naftiisa!!!!!!
Anigu haddaba hal arrin uun baan ka wadi waayay sababta ay dadkaasi waxaas oo ixtiraam darro ah ugula kacayaan dadkan masaakiinta ah ee ay u adeegaan, waa iyada oo aanu jirin nidaam maamul ama ha ahaado mid dawladeed ama ha ahaado mid cusbitaalka laftiisu leeyahay oo si waafi ah ula xisaabtama daba galna ku sameeya dadkan, shaqadana ka joojiya ama ruqsadda kala noqda.
Suxufi madax bannaan, Hargeysa Somaliland.